FIANTA Tsy milamina ny governemanta tsy misy foko Antemoro
Mpitsabo Malagasy FITRAMA Hanandratra hatrany ny vita Malagasy
Fasan’i Mangatokana ao Mahajanga Voazimbazimba nefa kasaina atao Vakoka
Lolo sy ny tariny, Rija R, Kiady Hampirevy ao Ambila Lemaitso
Azo lazaina ho fanokafana ny fiverenan’ny fizahantany ao Ambila Lemaitso ny seho miavaka atolotr’ireo kalaza Malagasy amin’ny mozika akostika hatao ao an-toerana ny 23 ka hatramin’ny 25 oktobra izao.
Mety hisy fanovana governemanta ato ho ato, hoy Randrianasoavina Christian, filohan’ny FIANTA na ny FIkambanan’ny Antemoro eto
Antananarivo. Hatramin’izay mantsy raha araka ny fanazavany hatrany dia tsy misy governemanta milamina raha vao tsy misy foko Antemoro ao anatiny. Efa hatramin’ny andron’Andraintsivongo izay razamben’izy ireo rahateo, hoy hatrany ity filohan’ny FIANTA ity no mpandamina ny disadisa izy ireo koa manome toky ireo tompon’andraiki-panjakana fa manana olona mahafehy tsara izany. Nandritra ilay hetsika antsoina hoe : “Sakaroho lebibe, Saotra lehibe” izay notanterahin’izy ireo teny Ivato ny faran’ny herinandro teo no nahafantarana izany. Hetsika izay nitsofan-drano sy nangatahim-pitahiana tamin’ny razana ho an’ireo zanak’Antemoro miasa sy mila ravinahitra eto Antananarivo mba hahomby amin’ny zavatra hataony sy ho salama izy ireo. Tena nety tamin’izy ireo ny andro omaly datin’ny 20 oktobra raha ny fantatra. Malaza amin’ny fanandroana ihany koa mantsy ny foko Antemoro sady mbola manaja sy mankato ny soatoavina Malagasy. Nofaranana tamin’ny sakafo lehibe sy ny fiarahana tamina mpanakanto malaza ny lanonana.